नया नेपालको बालसाहित्य | Ketaketi Online
Home » नया नेपालको बालसाहित्य
posted by ketaketionline on Wed, 11/26/2014 - 22:13
त्यति बेला काठमाडौंमा डेनिस राइटर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सेली आफ्ना अन्य दुई सहकर्मी साथीहरुको साथमा नेपाली बालसाहित्यकारहरुस“गको छलफलमा व्यस्त थिए । नेपाल बालसाहित्य समाजको निमन्त्रणामा आएका उनी कसरी बालसाहित्यको क्षेत्रमा जानकारीमूलक पुस्तक लेख्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन प्रयासरत थिए ।
वास्तवमा नया“ नेपालमा कस्तो बालसाहित्य लेखिनुपर्छ भनेर सोचविचार गरिरहेको म जस्तो बालसाहित्यको विद्यार्थीको मनमा यो प्रश्नले निकै उद्वेलित गरायो । म सोच्न बाध्य भए“ । अब नया“ नेपालमा बालसाहित्य कसरी लेखिनुपर्छ त ?
त्यति बेला मैले त्यो अवोध बालकलाई केही जवाफ दिन सकिन“ । तर मनमनै सोचे काठमाडौंको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने मधेसको बच्चोलाई साथीहरुले किन मदिसे भन्छन् ? म पनि मधेसकै हु“ । यदाकदा काठमाडौंवादको शिकार म पनि भएको छु । तर मलाई आफ्नो भन्दा त्यो बालकको पीडा गहिरो लाग्यो । मैले उसलाई दिने उत्तर पाइन“ । तर मैले उसको यो प्रश्नबाट एउटा पाठ भने अवश्य सिकें । आज मधेसी र पहाडी बीचको आपसी द्वन्दको आन्दोलनलाई यो परिस्थितिमा पुर्याउन हामी साहित्यकारहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेछौं नेताहरु जत्तिकै । हामी भित्र रहेको संकुचित धारणा र दास मनोवृत्तिका कारणले गर्दा हामीले यी अल्पसंख्यकहरुको मानमर्दन गर्दै थुप्रै लेखेछौं । हामीले यति लेखेछौं कि हाम्रो नया“ पीढि पनि त्यसैमा अभ्यस्त हुन थालेछ । फलस्वरुप आज एकातिर पुरानै दास मनोवृत्तिको पीढि हुर्किएछ र अर्कोतिर आफूलाई अपहेलित महसुस गर्ने मेरो साथीको जस्तै परिवेशका छोराहरु ठूला भएछन् । तिनको पीडा अहिले विद्रोेहको रुपमा सडकमा निस्किरहेको छ ।
त्यसैले अब हामी साहित्यकारले नया“ सोचमा लेख्न थाल्नुपर्छ । हामी आफ्नो लेखनमा समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने नाममा मधेस र
पहाडलाई अवहेलित गर्छौ । दलित र गरिबको मानमर्दन गर्छौ । अब त्यो प्रथा रोकिनुपर्छ किनकि साहित्यले समाजको सिर्जनात्मक प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ, विध्वंसात्मक परिस्थितिको बीजारोपण गर्ने होइन । तसर्थ अब लेखिने बालसाहित्यमा मान्छे मान्छे बीच विभाजनका रेखाहरु कोरिनुहुन्न । एउटा फराकिलो क्षितिज निर्माण गरिनुपर्छ । श्रम गर्ने र पसिना बगाउने एवं आफ्नो कर्मप्रति लगनशील मान्छे नै सर्वश्रेष्ठ मान्छे हो भन्ने निचोड दिनुपर्छ, जाली, फटाहा र वुद्धिको दुरुपयोग गरेर फाइदा लुट्नेको वाहवाही गरिनुहुन्न । कालो, सेतो, रातो, खैरो मान्छे जे जस्तो रंगरुपको भए पनि, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जो जता रहे पनि यी सबै नेपालीको देश नेपाल हो । यी सबै क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय र परिवेशका मानिसहरु मात्र नेपाली हुन् भन्ने भावना हाम्रा बालबालिका लाई हामीले दिन सक्नुपर्छ । नया“ नेपालको निर्माणमा हामी बालसाहित्यकारहरुका लागि यो एउटा चुनौतीपूर्ण दायित्व हो । यसलाई हामीले पूरा गर्नैपर्छ । अनि मात्र हामीले नया“ नेपाल निर्माणका लागि योगदान दिएको ठहरिनेछ । यस तर्फ आजैबाट हाम्रा लेखकहरु सजग रहनु नै नया“ नेपाल प्रति बफादार भएको मानिनेछ । यिनै बफादार लेखकबाट नै नया“ नेपालको निर्माणका लागि नया“ युगको बालसाहित्य लेखिनेछन् ।